‘दि ब्ल्याक डेथ ‘ पुस्तक केको बारेमा ?
बुधबार, जेठ ०४, २०७९
पछिल्लो समयमा मेरो छनौटमा पुस्तक ब्ल्याक डेथ रह्यो ।यो तीनैवटै पुस्तकहरू यूरोपमा केन्द्रीत छन जून कोरोना जस्तै महामारी बाँट बच्न १३ औ शताब्दीमा मानीसहरूले अपनायका बीधीको वरीपरी केन्द्रीय छ । मलाई लाग्छ कि म मानसिक रूपमा आघात भयको समयमा यस किसिमको पुस्तक पढिरहेको छु तर अर्कोतिर यसले कसरी जवाफ दिन्छ त हाम्रो वर्तमान परीस्थीतीमा भनेर आशा पनी जगॉईरहेको छ !! सबै तीन पुस्तकहरु पढ्न लायक छन् र क्लासिक पनी ।
कोरोना भाइरस द्रुत गतीमा फैलीरहेको छ र आज यो विश्वव्यापी संकट हो ! यस्को न हामीसँग उपचार गर्न वैज्ञानिक ज्ञान छ न एन्टिडोट्स खोप नै । आउनूहोस यस पुस्तकको छोटों चर्चा गरौ । समयका इतिहासकारहरू, व्यक्तिहरू जसले हाम्रो दैनिक जीवन र हाम्रो परिवार र समुदायले अनुभव गरेको विपत्तिको बारेमा लेख्नेगर्दछन । हामीलाई वास्तवमा के भएको थियो भन्ने कुराको अमूल्य रेकर्ड दीने गर्दैछन , महामारीको परिस्थितिको बारेमा उनीहरूले के गरे, उनीहरूले कसरी कारणहरू बुझे र कसरी तिनीहरू बाँचे वा यो कसरी हट्यो यस बीषयमा आज हामीले बूझ्नू ज़रूरी हून्छ ।
मलाई फीलीप जीगरको तीन पुस्तकहरु मध्ये सब भन्दा पुरानो पुस्तक, द ब्ल्याक डेथ जून १९६९ मा प्रकाशीत गरेका थीय यस्ले मलाई यो परीस्थीमा तानेको थीयो ,यस्ले ठूलो महामारीको कहानी बताउदछ जुन चीनबाट आएको थियो र त्यसपछि युरोपमा १३४८ देखी १३५१ को बीचमा फैलिएको थियो। यो ठूलो महामारी हो भन्ने चलन थियो जसलाई plague (प्लेग ) भनीन्थ्यो ।
यो मुसा र उडुसमा बाँचेको हून्थ्यो । यो मानवको लागि अती नै घातक थियो र युरोपको आधा जनसंख्याको एक तिहाइमा फैलीयको थीयो । जिगलरको भनाईमा जुन विपत्तीको खबर पहिलो पटक चीनबाट युरोपमा सन १३४६ तिर पुग्यो। यो दुर्गम समयका समाचारहरू बिस्तारै यात्रा गर्थे र समय लाग्ने गर्दथ्यो ! जस्ले लामो समय लीयको थीयो !
जून रहस्यमय उच्च मृत्युदर रोग सन १३४७ मा आयको थियो र भूमध्यसागरीय बन्दरगाह शहरहरू र त्यहाँबाट स्कटल्याण्ड र आयरल्याण्ड स्वीडेन र नर्वे हूदै युरोपभरि फैलियो । यो रोग घोडाहरू वा मानिस हिंड्ने गतिमा फैलियो भने सम्भवतःमध्ययुगका युरोपका गाउँहरू, शहरहरू र शहरहरूको जनसंख्या ठूलो संख्यामा मानीसहरू मरे। तथ्याक्क फरक-फरक हुन्छ र १४ औं शताब्दीमा मृत्युको शुद्धताका लागि दृढ हुन गाह्रो थीयो । विभिन्न स्रोतहरूले केही छोटो जानकारी मात्र दीयका छन ।
१३ औं शताब्दीको उत्तरार्धमा विश्व जनसंख्या अनुमानित ४७५ मिलियनबाट ३५० मिलियनमा झरेको थीयो। युरोपको जनसंख्या पुन: प्राप्ति हुनको लागि २०० वर्ष लाग्यो। यो वास्तवमै डरलाग्दो र अभूतपूर्व समय थियो जब स्थिर विश्वको सबै धारणा समाप्त भयको थीयो ! इतिहासकारहरू यसका कारणहरूका बारेमा तर्क गर्दछन्, उनीहरूले महामारीको अगाडि के अन्य दुर्घटनाहरू थिए जुन हामी ब्ल्याक डेथ भन्छौं भनेर सोध्छन् (यद्यपि यस समयमा यसलाई महान मृत्यु भनिन्थ्यो)। यो पश्चिमी सभ्यताको एक महत्वपूर्ण मोड थियो। के यो एक zoomorphic रोग (जनावरबाट मानिस र त्यसपछि मानिस देखि मानिसमा फैलिएको) थियो?
म सचेत छु कि म यस लेखलाई वास्तवमा लेख्न बस्दा कोरोना भाइरसको cases संख्या डेड मिलियन ( २०२१) भन्दा बढी पुगेको छ। ईतिहासको पन्ना पल्टाउँदा ६७४ बर्ष पछि मैले सोच्न थाले कि त्यहाँ कुनै पाठ छ वा “टेक-अवेज” जुन लामो टाढाको ईतिहासबाट बाच्न सकीयोस भन्ने लागीरह्यो ।। ईतिहासको पन्ना पल्टाउँदा ६७४ बर्ष पछि मैले सोच्न थाले कि त्यहाँ कुनै पाठ छ वा “टेक-अवेज” जुन लामो टाढाको ईतिहासबाट बाच्न सकीयोस भन्ने लागीरह्यो ।।
महामारी युरोपमा मुख्य व्यापारिक मार्गमा आएको थियो जहॉ जहाजहरूले युरोपको बजारमा मसलाहरू र रेशमहरूको लागि कन्स्टान्टिनोपल गराउने क्रममा मूसाहरू आइपुगे र मुसाले भाँडा सामान हरू मा यो प्लेग छोडीरहे मानीसहरूले यस्लाई भगाउने अज्ञानी तरीक़ा अपनाउदै गय र मानीसमा सर्दै गयो । व्यक्ति, जहाजहरू, र शहरहरू अलग गर्नको लागी प्रयास पनि अपनाइएको थियो तर सधैं सफलता हात आउन सकेन । क्वारेन्टाइन शब्द इटालियनबाट आएको हो -यो ४० दिने क्वारंटाइन हूने गर्दथ्यो । अचानक मृत्युले आश्चर्यचकित बनाईरह्यो केहीको लागि दुई वा तीन दिन भन्दा बढि आफ्नो ओछ्यान राख्यो, वा आधा दिन।
तब यो क्रूर मृत्यु सूर्यको मार्ग पछ्याउँदै चारैतिर फैलिदै गयो । प्लेग डाक्टरहरूले ब्ल्याक डेथ जस्ता घातक रोगहरूबाट सक्रमीत हुनबाट जोगिन बर्ड-जस्तो चियाको मास्क लगाउन सूझायका थिए जुन उनीहरूले विश्वास गरे कि यो बायूबाट सरेको थियो। वास्तवमा उनीहरूको विचारमा यो रोग ‘खराब वायु’ को घातक प्रकार, मिअस्माबाट फैलिएको थियो। तिनीहरूले प्रयास गरेका केही उपचारहरू प्याज, जडीबुटी वा काटिएको सर्प (फोहोरमा उपलब्ध छ भने) वा परेवा काट्नु र संक्रमित शरीरमा यसलाई लगॉउनू ।भिनेगर पिउदै, खनिज, आर्सेनिक, वा दस-वर्ष पुरानो ट्रेमेल खाँदै आफूलाई सूरक्षीत राखीरहे ।
प्लेगको अन्त्य कसरी भयो भन्ने सबैभन्दा लोकप्रिय सिद्धान्त संगरोधको कार्यान्वयन मार्फत हो( the implementation of quarantines ) । उनीहरू घरमा नै रहीरहे र आवश्यक परेमा मात्र बाहीर नीस्कीयका थीय , त्यसो गर्न सक्षम हुनेहरू बाच्न सफल रहे । सघन जनसंख्या भएका क्षेत्रहरू छोड्ने र पातलो बस्ती अर्थात् दूरीमा बस्ने गर्न थाले र यो बीस्तारै ७ औ बर्षमा हराउदै गयो। र आज हामी चाहने हो भने १ बर्षमा नै हराउन सक्छौ । यो पुस्तक मध्यकालीन इतिहास कोर्सको लागि मानक निर्धारित पुस्तक भयो र यथार्थ पनी । गोटफ्राइड प्लेगको उत्पत्ति र यसको प्राकृतिक इतिहास, यूरोपीय सन्दर्भको बारेमा लेख्छन्।
यसले हामीलाई यो सम्झना गराउँछ कि महामारीको पूर्वमा भएको विश्वको प्रकृतिको बुझाइको भाग हो – यदि कोरोना भाइरसले समुद्री परिवर्तनलाई चिह्नित गर्‍यो भने के हामीले त्यसलाई ग्लोबल वार्मिंग र कार्बन फुटप्रिन्टको मुद्दासँग सम्बन्धित गर्न आवश्यक छ। यस पुस्तकको मध्य अध्यायहरू प्लेगको वास्तविक प्रगतिको बारेमा छन् – के भयो, कहिले र कहाँ। पुस्तकका अन्तिम तीन अध्यायहरूले तत्काल र त्यसपछि दीर्घकालीन परिणामहरू लेखीयको छ । यहाँ मुख्य प्रश्नहरू आधुनिक औषधिको प्रगति वरिपरि घुम्छन् र कसरी युरोप यस प्रकोपले लामो अवधिमा परिवर्तन भएको थियो। उनको तर्क यो छ १३औं शताब्दीको अन्तसम्म युरोप, मध्य पूर्व, उत्तर अफ्रिका र एशियाको अधिकांश भाग इतिहासको सबैभन्दा गम्भीर वातावरणीय संकटबाट ग्रस्त थियो। प्लेग यस वातावरणीय संकटको सबैभन्दा भयावह प्रदर्शन मात्र हो र मानिस अवाक् थियो। ब्ल्याक डेथलाई इतिहासको सबैभन्दा ठूलो जैविक वातावरणीय घटनाको रूपमा दर्जा दिइयो। यो एक धेरै व्यापक दाबी हो र मलाई लाग्छ अब हामी चिकित्सा विज्ञानको क्षमतामा समायोजन गर्न र प्रतिक्रिया दिन र समाधान खोज्ने विश्वास गर्दछौं, के हामी १४ औं शताब्दीका मानिसहरु जस्तै यकिन हुन सक्छौं त ? कि मानव जातिको भविष्य एक प्रजातिको रूपमा निश्चित छ भन्नेमा बीश्वास गर्छौ ??
के नेपालमा काङ्ग्रेसको सान्दर्भिकता सकियको हो ?
एक इन्जिनियरको आँखामा बिझाईरहेको देश
रुस र युक्रेनबीच शान्तिवार्ता सुरु, युद्ध अन्त्य गर्ने विषयमा छलफल हुँदै